मास्क प्रकरण : प्रधानमन्त्रीले नै झूट बोलेपछि ...! [भिडियोसहित]
काठमाडौं - राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा धुवाँ, धुलो र दुर्गन्धबाट हैरान नभएका सर्वसाधारण सायदै होलान् । नेपाललाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउने परिकल्पना राजनीतिक भाषणमा खुबै सुनिन्छन् तर अवस्था सुध्रिने कहिले हो कहिले ? जनतालाई पत्तो छैन ।
एकातिर फोहोर गन्हाएको दुर्गन्ध र अर्काेतिर धुलोयुक्त हावाले सर्वसाधारण हैरान छन् । तर स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने सरकारी निकायका अधिकारी मस्त छन् । झन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त धुलोधुवाँबाट बच्न मास्क लगाउने मान्छे घटेको बताउँछन् ।
जनताको करबाट किनिएको सुविधासम्पन्न गाडीमा गुड्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका दुःख देख्नै छाडेका छन् तर जनतालाई धुलोधुवाको हैरानीले छाडेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिवार राष्ट्रिय सभा गृहमा स्वर्गीय मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौंमा अहिले कसैले पनि माक्स लगाएर नहिँडेको बताएका छन् । ओलीको बोली सुनेर सर्वसाधारण भने आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका समस्या देख्नै छाडेको प्रष्ट देखिएपछि आक्रोश नबढोस् पनि किन ?
सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिपयले कारमा हिँड्नेले आम सर्वसाधारणको पीरमर्का बुझ्न नसक्ने व्यंग्य गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सडकको दृश्यले खण्डन गरेको छ झूटो सावित गरिदिएको छ । धुलोधुवाँले हैरानी दिने काठमाडौंका सडकमध्येको एक हो –चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्ड । जहाँ मास्क लगाएका सर्वसाधारण र धुलोधुँवा आतंक सहजै देख्न सकिन्छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका समस्या र दुःखलाई किन ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् ? ओलीले काठमाडौंका जनता मास्क लगाउँदैनन् भन्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेकेजस्तै भएको त छ, सँगसँगै सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत नकारात्मक भइरहेको छ । तसर्थ सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि नेता ज्यूहरूले जिब्रो चलाउँदाखेरी ख्याल गरेर बोल्ने कि ?